श्री शालिवाहनीय शाके १९४२ ने. सं. १८४१ वि.सं. २०७७ साल चैत २ गते सोमबार, १५ मार्च २०२१ । प्रमादि संवत्सर फाल्गुन शुक्लपक्षको द्वितीया तिथि १९ः०३ बजेसम्म, उप्रान्त तृतीया, नक्षत्र रेवती ४ः५५ बजेसम्म, उप्रान्त अश्विनी, चन्द्रमाराशि मीन, सूर्योदय ६ः१३ र सूर्यास्त ६ः१२ मा हुनेछ ।
अनावश्यक वचन दिने बानीले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। अनावश्यक धन खर्च हुने देखिन्छ ।
लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कामहरू पूरा हुनेछन् । रमाइलो यात्राको योग रहेको छ ।
नयाँ व्यक्तिसँग भेटघाट हुने समय छ । साहित्यिक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ ।
आज सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ । अचल सम्पत्ति हात पर्ने योग रहेको छ ।
आज मित्रवर्ग वा हितैषीबाट राम्रो सहयोग मिल्नेछ । लामो समयदेखि रोकिएका कामकाज पूरा हुनेछन् ।
आज मित्रवर्ग वा हितैषीबाट सहयोग मिल्नेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिएला ।
वस्त्रजन्य व्यापार–व्यवसायबाट प्रशस्त लाभ मिल्नेछ । सोचे अनुरूप लाभ मिल्दा मन प्रसन्न रहला ।
जग्गा–जमिनको कारोबारबाट हानि नोक्सानी हुनेछ । पैसाको लेनदेन गर्दा सावधानी अपनाउनु होला ।
वैदेशिक क्षेत्रबाट प्रशस्त लाभ मिल्नेछ । सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ ।
आज परिवारबाट सहयोग मिल्नेछ । विपरीत वर्गप्रति आकर्षण बढ्नेछ ।
आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ । मनोरञ्जनात्मक तथा रमाइलो कार्यक्रममा सहभागी भइएला ।
आर्थिक समस्याले तनावको सिर्जना हुनसक्छ । व्यवसायमा नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सोमबार, ०२ चैत, २०७७, बिहानको ०८:४९ बजे